तपाईंलाई थाहा छ, कुन थरको गोत्र के हुन्छ ? - Samatal Online
काठमाडौं। गोत्रका विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । नेपाली समाजमा अधिकांशले हिन्धु धर्म मान्दै आएकाले पनि गोत्र महत्वपूर्ण विषय हो । जस्तो कि सहगोत्रसँग विहे गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कुन गोत्रसँग मितेरी गाँस्ने, कुन–कुन गोत्र कुन जाति अन्तर्गत पर्दछन् ? आदि विषय तपाईंका लागि रूचिका विषय बन्न सक्छन् ।